Ozugbo n'èzí ókè nke ihe ga-ekwe omume bụ ihe ọmụma nke ude nwere ike iwepu scars. Taa, ụdị ude dị, ma ọ bụghị ha niile dị irè. O doro anya na laser ka bụ ụzọ kasị dị irè isi wepụ scars . Ma ọ bụghị mmadụ nile nwere ike ịme usoro a, ọ bụghị mmadụ niile ga-anwa anwa ime ihe dị otú a. Olileanya ha na-anọgide na-emepụta mmanụ, mmanụ, gels na ọbụna plasters, bụ nke, n'okpuru nduzi nke ndị ọkà mmụta sayensị nke oge a, mepụtara ma kee.
Kontraktubeks - ude megide scars na scars
O di nwute, ihe otiti a na-achota ihe ndi mmadu na-eme. Ndị mmadụ na-eji ya, ma mmetụta kwesịrị ekwesị anaghị eme ọbụna ma ọ bụ iji ogologo oge mee ihe.
Esi mmanụ nwere ihe dị iche iche dị iche iche, nke na - ezo aka na - ejiri ya mee ihe dị ka ọgwụ ndị na - emepụta ọgwụ, na ihe ndị ọzọ.
Kontraktubeks mejupụtara heparin sodium - heparin sodium - nke a na inhibits ọbara clotting, allantoin na wepụ nke eyịm. Ntuziaka ndị a na-ekwu na mmanu ahụ na-akwụsị ngwa ngwa iji kpụchaa scars, ya mere eji ya na scars ọhụrụ. Ọgwụ na-eme ka mmepụta nke collagen na-emepụta ma nwee mmetụta mgbochi mkpali.
A na-eme ka mmanụ otite maka ịkụ ụkọ na-emighị emi. A na-atụ aro ka a jikọọ ya na ultrasound maka mmetụta dị mma - ikekwe, ya mere, enwere nyocha ndị na-adịghị mma site n'aka ndị ji ya na-enweghị ultrasound.
Esi si scars na ihu na ebe ndị ọzọ Kelofibraza
Kelofibraza bụ abụba, nnukwu ude, yiri nke ederede na mmanu. O nwere ihe atọ dị mkpa: urea, nke na-achịkwa usoro ikpochasị akpụkpọ anụ, nke a na-emekwa ka ọ dịkwuo ike, sodium heparin na D-camphor, nke nwere mmetụta na-egbu egbu na nke analgesic.
A na-eji ogwu jilofibraza ọ bụghị nanị na-emeso scars, kamakwa iji gbochie njigide na akpụkpọ ahụ, na-esi na mmụba mberede ngwa ngwa. A na-etinyekwa ude a site na scars mgbe ọkụ - urea dị mma moisturizes ma weghachite mmiri na akpụkpọ ahụ. A na-atụle ọgwụgwọ a ọzọ dị na mgba maka akpụkpọ anụ na-enweghị ncha. A na-eji ụlọ ọrụ ahụ mee ihe 2 ruo 4 ugboro n'ụbọchị.
Kelo-cote (Kelo-cat) - ude maka resorption nke scars na silicone
Ngwaọrụ a nwere ihe abụọ na - adọrọ mmasị - polysiloxane - silicone, nke bụ ụdị mmepụta ihe nke mkpụrụedemede na silicone dioxide. A kwenyere na silicone dioxide bụ ngwá ọrụ kachasị dị irè iji mee oge, jiri ya mee ihe na-emeghị ihe ọ bụla maka ịgwọ scars, scars na gbatịa akara.
Nke a na-enyere aka na scars ghọọ ewepụghị, nro na ooh. Kelo-cat ọ bụghị nanị na eweghachi akpụkpọ ahụ, ma na-echebe ya maka awa 24.
Onye na - eche nche - onye na - elekọta gị maka ọgwụgwọ
Nke a na -eme maka ọgwụgwọ nke scars nwere ihe atọ dị mkpa - hydrocortisone, vitamin E na silicone. Ngwakọta dị otú ahụ na-enye obi ụtọ nwere ike ịdị irè - vitamin E moisturizes ma na-emezi akpụkpọ ahụ, na ihe nkedo na-edozi ahụ ma na-echebe akpụkpọ ahụ karịa oge. Mgbe a na-eji ya eme ihe, mmanụ ahụ na-eme ka akpụkpọ anụ ahụ mebiri emebi ma na-agwọta anụ ahụ n'otu oge. A na-atụ aro ịṅụ ọgwụ ahụ ugboro abụọ n'ụbọchị - n'ụtụtụ nakwa ná mgbede.
Spenco - silicone efere
Ọgwụgwọ scars na scars site n'enyemaka nke mmanu bụ otu usoro nke na-enweghị ike ịkwado onye ọ bụla, n'ihi nzukọ nke ụbọchị ma ọ bụ mmetụta onwe onye, ​​ya mere ndị na-enye ọgwụ na-emepụta ụzọ ọzọ - site n'enyemaka nke efere.
Spenko bụ drapeepe transperente 10x10 cm. A na-etinye efere ahụ n'akụkụ mpaghara ahụ nwere nsogbu ma ọ bụ bandeeji ma jiri ya na-agwọ ụdị ọnya ọ bụla.
Akara Zeraderm Ultra
Mgbagwoju a nke ude sitere na nchara mgbe ihe a na-eme bụ ihe nkiri na akpụkpọ ahụ, nke na-eme ka anụ ahụ mebiri emebi ma na-akwalite ọgwụgwọ, ma nwee mmetụta na-enweghị mmiri. Ngwaahịa ahụ na-echebe akpụkpọ ahụ site na ụzarị ọkụ UV, ya mere enwere ike iji ya mee ihe iji mee ihe nkedo na ihu.
Ude maka akọrọ akpụkpọ
Ụda ude maka Nchikota anụ
Mmiri mmiri maka ihu
Parabens na Ngosiputa Ngwa
Ude maka nsogbu akpụkpọ
Ude maka akwa tanning na bronzer
Egwuregwu maka brunettes
Gel Eliminal si acne
Nri na-esi ísì utọ
Liquid eyeliner - ngwá ọrụ kasị mma maka onye na-agba ụta zuru okè
Enwere m ike ime ime n'ime otu ọnwa mgbe a mụsịrị nwa?
Ngwakọta nke apụl
Siear si urethra
Hypoxia nke nwa ebu n'afọ
Iche iche nke cucumbers maka na-eto eto na windowsill
Jay Zee na Beyonce nyere onyinye nke nwa nwanyị a mụrụ ọhụrụ Kanye West na Kim Kardashian
Nsogbu - gini bu nke a, otu esi emeso ya?
Progesterone - mgbe ị ga - ewe?
Oge ejiji oge - 2016
Silikon maka akwarium - akwadoro maka ojiji na oke
Ebube ndị inyom mmiri 2018 - ihe jaketị ga-abụ nke na-asọ oyi na mmiri a?
Akpụkpọ ụkwụ - ejiji 2015
Ndebanye aha nke otu n'ime ụlọ akwụkwọ ọta akara
Maddox jụrụ izute Brad Pitt
Ntị maka egbugbere ọnụ
Ụzọ si plastaboard